Black ကပေါ်လကာတေး Dots Long က Cardigan | ဗုဒ္ဓ Trends - Buddhatrends
အခြေခံပညာက Black ပေါ်လကာတေး Dot Cardigan
တစ်ခုမှာအရွယ်အစား / Black က
S က **** တစ်ဦးအမ်
အံ့သြစရာအရည်အသွေးကို။ အခမဲ့ရေကြောင်းအရောင်းရဆုံးအလွန်စေ့စေ့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခမဲ့ရေကြောင်းအသေးစိတ်နှင့် Rapido
M က *** ဈ R.
J ကို **** တစ် P.
nice ဂျာကင်အင်္ကျီ, cardigan, ကောင်းသောအရည်အသွေး, ချုပ်ရိုးကိုခန္ဓာကိုယ်မှကောင်းသောအလွန်သာယာသောနှင့်အတူပြီးဆုံးနေကြသည်။ အရွယ်အစားကတော့အတိုင်းအတာစားပွဲပေါ်မှာကိုက်ညီ။ 118 ဩဃ 120 အကြောင်းကို na နှင့်ဿုံထိုင်တော်မူ၏။ ပို့ဆောင်မှုမြန်ဆန်စွာ, သင်ရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
L ကို *** တစ်တီ
အရည်အသွေးကောင်းဂျာကင်အင်္ကျီ! အားလုံးချုပ်ရိုးချည်ထွက်ကပ်ပါဘူး, ပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်ငါ၏မိခင်အဘို့ကိုယူ။ မူအရမင်္ဂလာပေမယ့်အနက်ရောင်အရောင်မရောထွေး။ ဓာတ်ပုံလှပသောနက်ပြာရောင်ကား! ဒီမတိုက်ဆိုင်ဘို့ကြယ်ငှားရမ်းထားသော။ စိန့်ပီတာစဘတ် (17.04 အမိန့်, တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆင်ခြေဖုံးမှပေးပို့ 25.05 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ရှည်လျား ((
: D ***** y ကအယ်လ်
တစ်ဦးက ***** တစ်အက်စ်
အီး *** တစ်ဦး P.
တစ်ဦးက ****** r ကိုအက်ဖ်
သငျသညျအဖုံးထက်သင်၏ "oversayz" လိုတဲ့အခါကောင်းသော Koften ။ ငါထိပ်ကြောင်းကောင်းစွာဒီ store မှာဆင်မြန်းအင်္ကျီဝယ်? ဒီ cardigan ရုံပါပဲ။ အရွယ်အစား 48-50 ရက်နေ့တွင်, မော်ဒယ်အရွယ်အစား 40 နှင့်အဒေါ်-кладовщицыအပေါ်သကဲ့သို့ငါ့ကိုအနည်းငယ်အဝတ်သတိပေးခဲ့သည်။ ငါဝမ်းမြောက်စွာအလွန်လက်တွေ့ကျဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
S က ****** တစ်ဦး G. အ
Cardigan စူပါ) အရွယ်အစားမီတာ (ရုရှား 46), အထည်တစ်ဦးသိပ်သည်းဂျာစီဆင်တူသည်ဿုံထိုင်လျက် elastane နှင့်အတူအနည်းငယ်,) ကိုရောင်းချသူထံမှမော်စကို 10 ရက်, သေးငယ်တဲ့ prezentik သှေးအလွန်မြန်ဆန်စွာဖြန့်ဝေကိုဖန်ဆင်း) ။ အဆိုပါ cardigan အတိအကျနည်းတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုခငျြသညျ!
အို ** တစ် K.
ပုံထဲကအတိုင်း nice ဂျာကင်အင်္ကျီ။ ) ဆိုးဆိုးရွားရွားအရေးအကြောင်းတွေတို့သည် လာ. သာ)
တစ်ဦးက *** တစ်ဦး P.
ဂရိတ် cardigan !!!!!!!! စူပါရောင်းချသူ !!!!! အကြံပေးလို !!!